स्थनीय तह निर्वाचन : नेकपा एमाले भानु ४ का वडाध्यक्ष उमेदवार राजेश पन्थका २५ बुँदे प्रतिबद्धता – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. स्थनीय तह निर्वाचन : नेकपा एमाले भानु ४ का वडाध्यक्ष उमेदवार राजेश पन्थका २५ बुँदे प्रतिबद्धता – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
स्थनीय तह निर्वाचन : नेकपा एमाले भानु ४ का वडाध्यक्ष उमेदवार राजेश पन्थका २५ बुँदे प्रतिबद्धता
१४ बैशाख २०७९, बुधबार April 27, 2022
नेकपा एमालेका भानु नगरपालिका वडा ४ का वडाध्यक्ष उमेदवार राजेश पन्थले आफ्ना २५ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन ।
उनले भानु नपा ४को वडाध्याक्षको उमेदवारी किन ?
जनप्रतिनिधी जनताको शासक हैन्न ,जनताको सेवक हुन !
गरिब ब्यक्ती हुँ गरिव निमुखा जनताको सेवा नै मेरो प्राथमिकता रहेको बताउदै सामाजिक संजालमा आफ्नो २५ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन ।
यस्तो पन्थको प्रतिबद्धता पढ्नुहोस् ।
१,भानु४का जनतामा र आफ्नो ब्यक्तिगत जीवनप्रति दाग लाग्ने गरि कुनै पनि अबैध,अनैतिक कार्यहरु गर्ने छैन।
२,मेरो वार्डमा म जनतासंग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम संचालन गर्नेछु।
३,भानु ४ का जेष्ठ नागरिकहरुलाई तीन महिनामा निशुल्क स्वास्थ चेक जाँच गर्ने ब्यवस्था मिलाउने छु।
४, आर्थिक अवस्थामा अत्यन्त कमजोर रहेका वडा बासी बालबालिकाहरुलाई निशुल्क शिक्षा लिन सक्ने वातावरण बनाउने छु ।
५,भानु ४ मा रहेका फाटहरुमा ब्यासायिक खेती गरि कृषि उत्पादनलाई किसानको वारिबाट नै बिक्री गर्नेछु ।
६ , खातिथोक ,रानागाउ , गैरागाउको टनेल कृषीप्रणालीलाई वार्डभरी बिस्तार गर्नेछु ।
७,जन-आवस्यक्ताका आधारमा बिकाश निर्माणका बजेटहरु बिनियोजन गर्ने छु ।
८,म वडाको सिमितश्रोत साधनको भरपुर उपयोग गरि बार्षिक र दीर्घकालीन योजनाहरुको निर्माण गर्नेछु।
९,वडाको सिमित बजेटमा निर्भर नभै आवस्यकताको आधारमा केन्द्र, प्रदेश र पालिकासंग योजना अनुसारको बजेटको माग गर्न लागि पर्नेछु।
१०, आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल, रम्घा ,खातिथोक, रानागाउँ खुर्पाजुङ्ग कालिका, तामाकोट जस्ता पर्यटकिय सम्भावना बोकेको क्षेत्रहरुमा उचित पुर्वाधारको निर्माण गर्नेछु।
११,म वडा बासीहरुको पिउने पानीको शुद्धीकरण र एक घर एक धारा लागू गर्नेछु ।
१२, म वडा भित्रका सामुदायिक बनहरुसंग समन्वय गरेर साझेदारिमा नमुना बिकासका कार्यक्रम संचालन गर्नेछु।
१३, उत्तरीबेल्टमा रहेको चिसापानी, जोखाने ,रमाइलोबस्ती ,सुगुरे पखेरारिप ,खुरसानीगैरा, डाडागाउको बिकासको लागि दीर्घकालीन योजना त्यहा जनताको सहभागीतामा बनाउने छु ।
१४,म आफ्नो सम्पती सार्बजनिक गर्ने छु ।
१५,सडकहरुको स्तरउन्नती गर्ने, पिच गर्ने कार्यमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने छु ।
१६, बिधालयहरुका भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर उकास्न बिशेष पहल गर्ने छु ।
१७, सोलर बत्तिको बिस्तार सम्पुर्ण टोलमा गर्ने छु ।
१८ , बालक उमेर देखि नै ब्याक्तिलाई लगनशिल बनाउन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा ध्यान पुराउन सम्पुर्ण गाउहरुमा खेल मैदान ब्यस्थित तरिका बनाउन पहल गर्ने छु । भानु ४का बिधालयहरुका सम्पुर्ण खेल मैदान ब्यबस्थित बन्ने छन ।
१९,वडा भित्रका सडकहरु बिस्तार गरि नगर यातायात सन्चानल गरिनेछ।
२०,प्रत्येक चौमासिकमा वडाको सार्वजनिक सुनुवाई गरिने छ ।
२१,बेरोजगार युवाहरूलाई सीप र तालिमको व्यवस्था सहित रोजगारिको सृजना गरिनेछ।
२२,वडाभित्र रहेका शैक्षिक सस्थाहरुमा प्राबिधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
२३,सम्बन्धित बैंकसङ्ग समन्वय गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोलटोलमा बितरण गरिनेछ।
२४,वडा भित्र रहेका आमा समूह, महिला सन्जालहरुसङ्ग समन्वय गरि महिला हकहित ,सीप बिकास र रोजगारीका कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ ।
२५,दलित समुदायको र आर्थिक अबस्था कमजोर भएका जनताको जीवनस्तर उकास्न दलित र गरिब सङ्ग कार्यक्रम लागू गर्ने छु ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १४ बैशाख २०७९, बुधबार April 27, 2022 204 Viewed